Multimedia Server: MiniDLNA | ကို သုံး၍ GNU / Linux တွင်ရိုးရှင်းသောတစ်ခုကိုဖန်တီးပါ Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | 19/09/2021 06:00 | applications များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်သေးငယ်အောင်မည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုစူးစမ်းမည် “ မာလ်တီမီဒီယာဆာဗာ” နေအိမ် ရိုးရှင်းပြီးလူသိများထင်ရှားသောနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည် ကို DLNAမရ။ ဆက်စပ်သောအတိုကောက်များ "ဒစ်ဂျစ်တယ်နေထိုင်မှုကွန်ယက်မဟာမိတ်"စပိန်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုသောအဓိပ္ပါယ် "ကွန်ယက်ဒစ်ဂျစ်တယ်လူနေမှုပုံစံအတွက်မဟာမိတ်".
၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သေးငယ်ပြီးအလွန်လူကြိုက်များသော terminal application တစ်ခုကိုသုံးလိမ့်မည် MiniDLNAမရ။ the repositories အားလုံးနီးပါးတွင်ရနိုင်သည် GNU / Linux Distros လူသိအများဆုံးနှင့်သုံးသည်။ အခြားကွန်ယက်သုံးစက်များ၊ ဒက်စတော့များသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းများမှအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့လူသိများပြီးကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနေသောမာတီမီဒီယာအပလီကေးရှင်းကိုသုံးလိမ့်မည်။ VLC.
DLNA ကို သုံး၍ Linux ကို streaming လုပ်သည်
ထုံးစံအတိုင်းပဲ၊ ဒီနေ့အကြောင်းအရာကိုအပြည့်အ ၀ မသွားခင်ငါတို့ရဲ့နောက်ဆုံးယခင်အချို့ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုထားခဲ့မယ် ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ ၏ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူ မာလ်တီမီဒီယာဆာဗာများ y ကို DLNA၎င်းတို့အားအောက်ပါလင့်ခ်များ ထို့ကြောင့်ဤစာစောင်ကိုဖတ်ပြီးသူတို့လိုအပ်လျှင်လျင်မြန်စွာကလစ်နိုင်စေရန်
"DLNA (Digital Living Network Alliance) သည်၎င်းတို့၏စနစ်များအတွက်လိုက်ဖက်သောစံတစ်မျိုးကိုဖန်တီးရန်သဘောတူညီခဲ့သောလျှပ်စစ်နှင့်ကွန်ပျူတာထုတ်လုပ်သူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ DLNA သည်မတူညီသောအကြောင်းအရာများကိုဝေမျှရန်တစ်ခုတည်းသော network အတွင်းမှကွဲပြားခြားနားသော device များအားအချင်းချင်းဆက်သွယ်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းကိုပေးနိုင်သောအားသာချက်သည်လွယ်ကူသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်၎င်း၏ဘက်စုံသုံးနိုင်စွမ်းဖြစ်သည်။ ဤစနစ်သည် Wi-Fi နှင့် Ethernet ကွန်ယက်နှစ်ခုလုံးတွင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။" DLNA ကို သုံး၍ Linux ကို streaming လုပ်သည်
Jellyfin: ဒီစနစ်ကဘာလဲ၊ ဘယ်လို Docker ကိုသုံးပြီးဘယ်လိုတပ်ဆင်သလဲ။
1 မာလ်တီမီဒီယာဆာဗာ: MiniDLNA + VLC
1.1 Media Server ဆိုတာဘာလဲ။
1.2 MiniDLNA ဆိုတာဘာလဲ။
1.3 MiniDLNA ကို install လုပ်ပြီးဘယ်လို configure လုပ်မလဲ။
1.4 Android မှ VLC ဖြင့် DLNA / UPnP-AV အကြောင်းအရာများကိုစီမံပါ
မာလ်တီမီဒီယာဆာဗာ: MiniDLNA + VLC
Media Server ဆိုတာဘာလဲ။
Un “ မာလ်တီမီဒီယာဆာဗာ” ၎င်းသည်မာလ်တီမီဒီယာဖိုင်များကိုသိုလှောင်ထားသည့်ကွန်ယက်ကိရိယာတစ်ခုထက်မပိုပါ။ ဤကိရိယာသည်ခိုင်မာသောဆာဗာ (သို့) ရိုးရိုး desktop (သို့) laptop ကွန်ပျူတာမှဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် NAS (Network Storage Drives) drive (သို့) အခြားသဟဇာတဖြစ်သော storage device တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
၎င်းအတွက်တစ်ခုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည် ပြန်ဖွင့်ပေးထားပါတယ်aနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည် “ မာလ်တီမီဒီယာဆာဗာ”ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်ရှိပြီးသားစံနှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုနှင့်သဟဇာတဖြစ်သင့်သည်။
တစ်ခုက ကို DLNAအိမ်သုံးကွန်ယက်သုံးကိရိယာများသည်မာတီမီဒီယာအကြောင်းအရာများကို ဆက်သွယ်၍ ဝေမျှပေးနိုင်သည်ကိုသေချာစေသည်။ နှင့်အခြားတစ်ခုဖြစ်သည် UPnP (Universal Plug and Play)၎င်းသည်မီဒီယာဆာဗာတစ်ခုနှင့်လိုက်ဖက်သောပြန်ဖွင့်စက်တစ်ခုအကြားပိုမိုယေဘုယျအားဖြင့်မျှဝေသောအဖြေတစ်ခုဖြစ်သည်။ DLNA သည် UPnP ၏ကြီးထွားမှုထက်ပိုမိုစွယ်စုံသုံးရလွယ်ကူသည်။
အဆိုပါအညီ MiniDLNA ဝက်ဘ်ဆိုက်လျှောက်လွှာကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်။
"MiniDLNA (လက်ရှိ ReadyMedia ဟုလူသိများသည်) သည်လက်ရှိ DLNA / UPnP-AV client များနှင့်အပြည့်အဝသဟဇာတဖြစ်စေရန်ရိုးရှင်းသောမာလ်တီမီဒီယာဆာဗာဆော့ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ReadyNAS ထုတ်ကုန်လိုင်းအတွက် NETGEAR ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး မှတီထွင်ခဲ့သည်။
MiniDLNA ကို install လုပ်ပြီးဘယ်လို configure လုပ်မလဲ။
ပါဝင်သောအထုပ် MiniDLNA repositories အားလုံးနီးပါးတွင်ခေါ်သည် "Minidlna"ထို့ကြောင့်သင်လုပ်စရာရှိတာကိုရွေးပြီးသုံးပါ GUI / CLI အထုပ်မန်နေဂျာ ၎င်းကိုပုံမှန်အတိုင်း install လုပ်ပြီးဖွင့်ရန်ပိုနှစ်သက်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်:
install လုပ်ပြီးသည်နှင့်အောက်ပါတို့ကိုသာလုပ်ဆောင်သင့်သည် command ကိုအမိန့် မင်းရဲ့အပြောင်းအလဲလေးတွေနဲ့ configuration ဖိုင် မည်သည့်အတွက်မဆိုနောက်မှပြေးပါ GNU / Linux ကွန်ပျူတာ သေးငယ်ပြီးရိုးရှင်းသည် “ မာလ်တီမီဒီယာဆာဗာ”:
မီဒီယာအကြောင်းအရာဖိုင်တွဲများ / လမ်းကြောင်းများကိုသတ်မှတ်ပါ
မှတ်တမ်းများ (လမ်းကြောင်းမှတ်တမ်းများ) ကိုဖွင့်ပါ
DLNA protocol အတွက်သတ်မှတ်ထားသောဆိပ်ကမ်းကိုအတည်ပြု / ဖွင့်ပါ
DLNA Media Server name ကိုသတ်မှတ်ပါ
မီဒီယာအကြောင်းအရာလမ်းကြောင်းများ / ဖိုင်တွဲများတွင်ဖိုင်အသစ်များကိုအလိုအလျောက်ရှာဖွေခြင်းကိုဖွင့်ပါ
အပြောင်းအလဲများကိုသိမ်းပြီး MiniDLNA Media Server ကိုပြန်လည်စတင်ပါ
URL ကို သုံး၍ Web browser တစ်ခုနှင့် Multimedia Server ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဒေသအလိုက်အတည်ပြုပါ
ယခုတွင်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်မာလ်တီမီဒီယာဖိုင်များကို configured လမ်းကြောင်းများ / ဖိုင်တွဲများသို့ကူးရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်သူတို့သုံးတဲ့ Web browser ရဲ့ interface ကနေတဆင့်သူတို့ကိုပြည်တွင်းမှာမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
Android မှ VLC ဖြင့် DLNA / UPnP-AV အကြောင်းအရာများကိုစီမံပါ
ဥပမာအားဖြင့်၊ Android မိုဘိုင်းကိရိယာ နှင့်လည်ပတ် VLC အက်ပလီကေးရှင်း၎င်းကိုခေါ်သောအပိုင်း၌စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပြလိမ့်မည် "ပြည်တွင်းကွန်ယက်" ငါတို့ရဲ့နာမည် “ မာလ်တီမီဒီယာဆာဗာ”မရ။ ငါတို့ပြင်ဆင်ထားသောလမ်းကြောင်းများ / ဖိုင်တွဲများကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးလက်ခံထားသည့်မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများကိုဖွင့်နိုင်သည်။
အတိုချုပ်အားဖြင့်သုံးပါ DLNA / UPnP-AV နည်းပညာ အက်ပ်မှတဆင့် MiniDLNA ရိုးရှင်းပြီးအသုံးဝင်သည် “ မာလ်တီမီဒီယာဆာဗာ” အိမ်သည်လွယ်လွယ်ကူကူနှင့်အတတ်နိုင်ဆုံးပျော်မွေ့ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများ ငါတို့ပိုင်တယ်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏မော်ကွန်းတိုက်များဖြစ်သည် အသံများ၊ ဗွီဒီယိုများ၊ ရုပ်ရှင်များနှင့်ရုပ်ပုံ / ဓာတ်ပုံများ ရိုးရှင်းတဲ့အိမ် (သို့) ရုံးသုံးကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာအခြားသူတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဝေမျှဖို့၊ ကြီးကြီးမားမားနဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့တိုင်းတာမှု၊ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ချက်တွေမပါဘဲနဲ့မျှဝေနိုင်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Multimedia Server: MiniDLNA ကို သုံး၍ GNU / Linux တွင်ရိုးရှင်းသောတစ်ခုကိုဖန်တီးပါ